Eden Lodge Madagascar: isa ny fahaleovan-tena
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Eden Lodge Madagascar: isa ny fahaleovan-tena
Novambra 22, 2017
Eden Lodge Madagascar mitoetra ao amin'ny tahirin-javaboary voaaro ao amin'ny nosin'i Nosy Be. Any amin'ny morontsirak'i Baobab misy fasika kristaly fotsy sy rano turquoise no misy azy, ny efitranon'ny 8 dia miorina ao anatin'ny tokontany izay misy hektara mihoatra ny 8 hektara feno natiora maitso sy zava-mahavelona miavaka.
Eden Lodge no hotely voamarina Green Globe voalohany teto Madagasikara. Ny eco-lodge lafo vidy dia nohamafisina indray tamin'ny taona fahenina ary nahazo isa mitentina 93%.
Ny fananana dia miara-monina mifanaraka amin'ny tontolo voajanahary sy ny bibidia manodidina azy. Mampalaza ity faritra ity noho ny taha avo indrindra amin'ny endemism izay ahitàna ireo hazo Boab efa mihoatra ny 500 taona, sokatra an-dranomasina, lemur, fiainana vorona, biby mandady ary amphibianina. Mba hampihenana ny fiantraikany dia mifikitra amin'ny a i Eden Lodge drafitra fitantanana maharitra izay manohana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana sosialy.
Ny toerana tsy manam-paharoa sy mitoka-monina amin'ny toerana misy an'i Eden Lodge dia midika fa ny fitantanana loharanon-karena mahomby dia zava-dehibe. Mampiasa herin'aratra sy zana-masoandro 100% ao an-dakozia ilay trano, ary mampianatra ny mpiasa amin'ny fomba fitsitsiana angovo. Ho fanampin'izany, ny trano fandraisam-bahiny dia vita amin'ny akora voajanahary voajanahary ary ny fananganana dia mifototra amin'ny fitsipiky ny fananganana nentim-paharazana mifanaraka amin'ny toetrandro. Ny programa fisorohana fisorohana dia napetraka miaraka amin'ny fanamafisana ny fitiliana ny famoahana rano hitehirizana ny rano. Ary tamin'ity taona ity, ny fiofanana ho an'ny mpiasa dia nifantoka tamin'ny fandaminana azo antoka ny fako mampidi-doza mifanaraka amin'ny fomba fitantanana fako.
Eden Lodge dia ao anatin'ny vondrom-piarahamonina hentitra ary namorona fifandraisana matanjaka amin'ireo mponina eo an-toerana, izay miasa ao amin'ilay trano ny ankamaroany. Fampiofanana be dia be amin'ny fampiharana maharitra Green Globe ary fahaiza-mandray vahiny ao anatin'izany ny fitarihana fandikana ny hevitry ny mponina ao an-toerana sy ny fianakaviany. Antenaina fa amin'ny ho avy dia homena fiofanana momba ny zavamaniry fanafody miaraka amin'ny programa hafa manasongadina ny kolontsaina malagasy ny mponina rehetra. Ankoatr'izay, i Eden Lodge dia manohana karazana hetsika CSR mba hampirisihana ny fampandrosoana isam-paritra. Ny programa fanaovana asa soa iray dia manentana ireo vahiny avy any Frantsa hanome zavatra ilaina any an-tsekoly ho an'ireo ankizy.
Satria ny sambo ihany no azo idirana, dia aleon'i Eden Lodge ny vokatra sy entana avy any an-toerana. Ny voankazo sy legioma rehetra dia avy amin'ny zaridaina, ny zaridaina ary ny mpamokatra eo an-toerana ary ny hazandranomasina sy trondro avy ao amin'ny tanànan'i Anjanojano dia aterina isan'andro. Tamin'ity taona ity dia nisy ny fitomboan'ny famokarana atody biolojika avy ao amin'ny Eden Lodge Farm izay tsy trano akoho ihany fa misy gisa sy gana ihany koa. Ny vorona dia mihinana sombin-javatra biolojika avy ao an-dakozia ary manome koa tain-tsakafo mahavelona izay ampiasaina ho zezika. Ny Farm dia dingana iray hafa mankany amin'ny fizakan-tena ary koa manintona vaovao ho an'ny mpitsidika.
Green Globe dia rafitra maharitra maharitra miorina amin'ny fenitra eken'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny asa maharitra sy ny fitantanana ny orinasan-fizahan-tany sy fizahan-tany. Miasa eo ambanin'ny fahazoan-dàlana manerantany, Green Globe dia monina any California, Etazonia ary misolo tena ny firenena mihoatra ny 83. Green Globe dia mpikambana iray ao amin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Ho fampahalalana, azafady click here.
Politikan'i Priceline "Azo antoka ny vidiny tsara indrindra": mamitaka ve izany?
Manakaiky ny antsasaky ny seranam-piaramanidina be olona indrindra eran-tany no manana politika tsy mifoka
Fitsidihan'ny tompon'andraikitra fizahan-tany ao Jamaika ny tetik'asa fanamboarana ny Campus Alpha
IMEX America dia manamarika dingana lehibe iray hafa amin'ny làlana mankany Mandalay Bay
Birao Mpanatanteraka Lufthansa: Mila fomba fijery mazava momba ny dia ataon'i Etazonia isika izao
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika dia mitarika amin'ny varotra fizahantany FITUR manerantany